लक्ष्मी उप्रेतीका तीन लघुकथा
सानो परिवार आमा, छोराबुहारी अनि नाति । सासू बुहारीका बिचमा कलह भइरहन्थ्यो । योगेश घरबाट काममा बाहिर निस्केपछि केही थाहा पाउँदैनथ्यो । भीमा बहुआयामिक चरित्रकी महिला । श्रीमान् घर हुँदा अत्यान्तै होसियार नहुँदा क्रुर र अमानवीय व्यवहार भएकी चण्डाल । सासूू देख्यो कि रिस पोख्नैपर्ने ।एकदिन भीमाले सासूलाई ‘छोराको शान्ति चाहनुहुन्छ भने तपाइँ घर छोडेर जानुस् ।’ फ्याट्ट विष ओकलिन् । लाचार पुष्पाले छोरालाई केही नभनेर छोराको सुखका निमित्त लुगाको सानो पोको बोकेर घरबाट निस्किन् ।
यो दृश्य देखेर नाति रोयो तर उसको केही लागेन । उसले “मम्मी ! पछि मेरी श्रीमतीले पनि हजुरलाई यसरी निकालि भने ?” रुदै प्रश्न गर्‍यो । “चुप लाग ! यो सब काम हाम्रै भलाइका लागि गरेकी हुँ । बाबालाई नभन्नु नि । भनिस् भने तँलाई जानेकी छु ।” भनेर धम्काइन् ।रातमा योगेश कामबाट घर आउँदा आमाको चालचुल पाएन । ऊ आमाको कोठामा गयो । आमाको कोठा रित्तै थियो । “आमा खोई ?” भान्सामा खाना पस्किरहेकी श्रीमतीलाई सोध्यो । “आमा केही नभनी दिउँसै हिँड्नु भो । छोरीकहाँ जानुभयो होला ।” रुखो जवाफ दिई भीमाले । योगेशलाई रातभर निन्द्रा लागेन ।
“कहिले आफूलाई नभनी कतै नहिँड्ने आमाले आज किन यसो गर्नुभयो ?” योगेशको मनमा चिसो पस्यो । उसले बिहानै छोराबाट कुरा थाहा पायो । योगेशले श्रीमतीलाई जगल्टयाउँदै “मेरी आमालाई मेरै घरबाट निकाल्ने तँ ? भन्दै कसेर एक झापड दिएर अब म पनि जान्छु भनेर हिड्ँछ । छोराले “म पनि तपाईसँगै जान्छु बाबा ।” भन्दै योगेशसँग टाँसिन्छ । त्यसपछि बाबुछोरा पनि निस्कन्छन् । भीमा टाउकोमा हात राखेर सोच्न थालिन्, “लोग्ने र छोराको भविष्य राम्रो होला भनेर यस्तो गरेँ । आखिरमा म एक्लै ?” उनमा ग्लानिभाव बढ्दै जान्छ ।
एकाबिहानै एक सुन्दर नारी ग्राहकका रुपमा आउँदा उसलाई खुसि लाग्यो । उसले मधुर मुस्कानसहित स्वागत गर्‍यो जवाफमा मुस्कान पायो ।“के सेवा गरौँ यहाँको ?” उसले व्यापारिक चातुर्य देखायो । “एकछिन है !” भन्दै केटीले आफ्ना कपाल मिलाई । उसले केटीको अनुहार लुकेर हेर्यो । “केटी त खुब राम्री छ । अब यसलाई सामानमा भुलाएर गफ गर्छुे।” उसले मनमनै योजना बनायो । “सामान नहेरी अलिकति पानी पिउन पाए हुन्थ्यो ।” केटीले आग्रह गरी । पसलमा अन्य कोही नभएकाले उसले आफैं पानी ल्यायो । अनि कुराकानी गर्दै लुगाछान्न र हेर्ने क्रम जारी रह्यो । “एउटा प्यान्ट देखाउनु न । भाइका लागि पनि हेर्नुपर्यो ।” केटीको माग अनुसार जेन्स पाइन्ट पनि आयो । सामानहरू प्याक गरेर झोलामा राख्यो ।
पसलमा ग्राहक थपिँदै गए । ऊ ग्राहकको माग पूरा गर्न भित्री कोठामा समान लिन गयो । बाहिर आएर हेर्दा पहिलेकी केटी पनि छैन, प्याक गरेको सामान पनि छैन ।“हैन, अघिको केटी कता गईछ । सामान पनि छैन ।” उसले त्यहाँ भएका अन्य ग्राहकलाई भन्यो । “मोबाइलमा कुरा गर्दै पसलबाट निस्केको देखे पनि सामान किनेर गएको होला भनेर मैले वास्ता नै गरिनँ ।” पसलमा भएको वयस्क ग्राहकले भन्यो ।“यति राम्रा केटी पनि चोर हुन्छन र ?” उसले आश्चर्य मान्दै बाहिर यताउता हेर्यो ।“यस्तै केटीले त हो आफनो रूपको जाल बिछ्याएर चोर्ने ठग्ने, लुटने । साहुजी केटीको सुन्दरतामा भुल्नुभयो होला । उसले आफनो हैसियत देखाएर गई ।” वयस्क महिला ग्राहकको कुरा सुनेर ऊ आफैसंग लज्जित भयो ।
आज सविताको जन्मदिन । जन्मदिन भएपछि खुसी हुनु स्वाभाविकै हो । छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएको बेला । के गर्ने, के नगर्ने, उनी रनभुल्लमा परिन् ।“केही अप्ठ्यारो नमान्नु होला। तपाईँ एक्लो अनुभव नगर्नुहोला । हामी छौं तपाईँका ।” दाजुदिदीका छोराछोरी समयसमयमा आउँछन् अनि सान्त्वना दिएर जान्छन् ।
छोराछोरी विदेश । उनको जीवन स्वदेश विदेश गर्दैमा ठिक्क छ । केही महिना जान्छिन् । केही महिना घरमै हुन्छिन्। जन्मदिन भएकाले एकाबिहानै मन्दिर जान निस्किनै लागेकी थिइन्, ढोकाको घण्टी बज्यो ।“को आएछ फेरि यो एकाबिहानै ?” उनले ढोकाबाट चियाएर हेर्दा त भदा र बुहारी रहिछन् । “हेर न बाबु ! आज आज मेरी एउटी साथीलाई अस्पातल लानु परेकाले म घर बस्न पाउँदिन । त्यसैले यसपल्टको मेरो जन्मदिनको शुभकामना फोनमा नै दिउन भन्ने लागेर फोन गर्न आँटेकी । तिमीहरू टुप्लुक्क आयौ ।” उनले अलि नमिठो मुख बनाएर भनिन् । बुहारीले श्रीमानलाई “फुफूलाई ल्याएको उपहार भित्र ल्याइदिनु । अनि म पनि फुफूसँगै जान्छु, हामीलाई पुर्याइदिनु ।” भनिन् ।“लौ पर्यो फसाद ! कसरी पिछा छुटाउँ भनेको त झन पछि लाग्ने भए ।” मनमनै यस्तो सोचेर सविता रनभुल्लमा परिन् ।
यसैबेला ग्यासले भरिएको सिलिन्डर भदाले गुडाउँदै ल्याउँछ र “यस पटकको हजुरको जन्मदिनको उपहार ।” भनेर ग्यास सिलिन्डर भान्सामा राखिदिन्छ । उनले मुसुक्क हाँसेर भनिन्, “घरमा ग्यास नभएर बाहिर जाने बहाना बनाएकी थिएँ । तिमीले त जन्मदिनमा गतिलो उपहार दिएछौ । लौ अब अरू मेरा माइतीलाई पनि बोलाउँ । सबै मिलेर यतै रमाइलो गरौँ ।” उनको यो कुरा सुनेर दुवै दुवै श्रीमान् श्रीमती एकअर्काको मुख हेर्न थाले ।